I-china isiko seplastikhi esenziwe ngokwezifiso songeza iplagi - abavelisi - i-dongguan qiaofeng iplastiki yehardware yemveliso Co., ltd
Ekhaya >Izahlulo zefanitshala zeplastiki > Isixhobo seplastikhi sokwandisa iplagi
Iplagi yolwandiso lwe-6 * 30mm PE
Iplagi yolwandiso lwe-10 * 50mm PE
Imiphetho yebreyidi kwityhubhu yokwandisa inokuthintela ityhubhu yokwanda ukuba ijikeleze kwaye inyuse ukungqubana ngexesha lofakelo. Ngoyilo olugqibeleleyo lokukhulisa igophe, inyusa kakhulu amandla okubamba kwaye ithintela ngokufanelekileyo iscrew ekuweni.
Iplagi yolwandiso lwe-9 * 40mm PE
FAQ: 1. Ingaba unayo umzi-mveliso wakho? Efektri yethu ibekwe kwiPhondo Guangdong. 2. Ndingatyelela njani umzi-mveliso wakho? Ii-Pls ngobubele zisazise kwangaphambili ukuba uceba ukutyelela Singakubonisa indlela okanye sikulande esikhululweni okanye kwisikhululo seenqwelomoya.
Iplagi yolwandiso lwe-7.5 * 38mm PE
Iplagi yolwandiso lwe-8 * 40mm PE
Iplagi yolwandiso lwe-7 * 35mm PE